रा’तमा नि’न्द्रा न’लाग्ने सम’स्या छ ? यस्तो उ’पाय अप’नाउनुहोस्।
पुरानो मुल्य तिर फर्कदै सुन आज पनि सोच्नै नसकिने गरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य।
आजवाट लागू भयो अनिश्चितकाल निषेधाज्ञा, दलकै नेताले कोरोना फैलाए भन्दै रिसायो प्रशासन
Home/टिप्स/रा’तमा नि’न्द्रा न’लाग्ने सम’स्या छ ? यस्तो उ’पाय अप’नाउनुहोस्।
काठमाडौं: पछिल्ल्लो समय कामको चा’प र विभिन्न प्रकारका त’नावका कारण थुप्रै मानिसहरुमा रा’तमा नि’न्द्रा नलाग्ने स’मस्या भएको पाइन्छ । स्वा’स्थ्यका दृष्टिको’णले ६ देखि ८ घण्टाभन्दा कम सुत्ने व्यक्तिहरुमा विभिन्न प्रकारका स्वा’स्थ्य सम’स्याहरु पैदा हुने गर्छ ।
कम निन्द्राका कारण रो’गप्रति’रोधात्मक क्ष’मतामा कमि आउने, पा’चन प्रक्रिया ग’डबढ हुने, मु’टुसम्बन्धी रो’ग लाग्ने, डि’प्रेशन, तौल बढ्ने जस्ता स’मस्याहरु हुने गर्छन् । दैनिक व्या’याम धेरैवटा अनुसन्धानले दैनिक व्या’याम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दैनिक व्या’यामले मिठो नि’न्द्रा दिलाउँछ भने नि’न्द्राको राम्रो रुटिन पनि बनाउन मद्दत गर्छ । साँझमा नसुत्ने दिनभर काम गरेर था’केपछि धेरैजसोले साँझमा ‘पा’वर न्याप’ लिने गर्दछन् । तर यसो गर्दा रा’तको नि’न्द्रालाई असर गर्छ ।
दिउँसो नसुत्ने दिनको समयमा १० देखि १५ मिनेट न्याप लिनु स्वा’स्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले थप उर्जा प्रदान गर्छ । तर दिनभर सुत्ने गरेमा रा’तमा निन्द्रा पर्दैन । हे’भी डिनर छि’टो तर थोरै खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ । रा’तमा मिठो नि’न्द्राको लागि रा’तिको खाना छिट्टै खानुपर्छ । साथै रा’तिको खाना कम खाने गर्नुपर्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
रातमा धेरै खाँदा एसि’डिटी, पे’ट फुल्ने र अन्य सम’स्याहरु हुने गर्छ र रातको नि’न्द्रा ख’टपट हुनसक्छ । म्या’ग्नेसियमयुक्त खाना एक अनुसन्धानका अनुसार मिठो नि’न्द्राको लागि म्या’ग्नेसियमयुक्त खाना खाने गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सा’गपात, फ’र्सीको बियाँ, बदाम र सूर्यमु’खी फूलको दाना जस्ता खानेकुरा रा’तिको खानामा सामेल गर्नुपर्छ । ग्या’जेट्सबाट टाढा रहनुहोस् ग्या’जेट्सबाट नि’स्किने ब्लू लाइटले मे’लाटोनिन नामक ह’र्मोन उत्पादन गर्ने गर्छ जसले निन्द्रा नआउने सम’स्या हुनसक्छ । त्यसैले सुत्नुभन्दा दुई घ’ण्टा अगाडि मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता सामानहरुको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्। कुन म’हिला त्यस्ती होलिन् जसमा मे’कअप गरेर आफ्नो सौ’न्दर्यमा नि’खार ल्याउने तथा ‘बटुल्ने चाहना नहोस् । क’मकाजी होऊन् वा गृ’हिणी, कम स’मयमै मे’कअप गर्न चाहन्छन्, प्रा’कृतिक मेकअप । यहाँ ५ मिनेटमै कसरी मेक’अप गर्न सकिन्छ त भनेर बताइएको छ, जसलाई गर्न सजिलो समेत छ ।
पा’उडरको तु’लनामा क्रि’म आ’इस्याडो तथा क्रि’म ब्लस अनले आँ’खा र गा’लाको छा’ला बढी सु’ख्खा देखिने बनाउँछ । केही समयपछि आँ’खाको छा’लामा सु’ख्खा ध’ब्बा एवं गा’लामा चा’उरी देखाइदिनसक्छ । यस्तोमा ला’इट पा’उडर एवं पा’उडर ब्ल’सअन प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । फा’उन्डेसन छा’लासँग म्याच गर्ने फा’उन्डेसन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मे’कअपको बे’स ठीक भयो भने मे’कअप प्रा’कृतिक देखिन्छ । ब’जारमा के’क लि’क्विड एवं पा’उडर फाउन्डेसन उपलब्ध छन् । घा’ममा धेरै बस्नुपर्ने छ भने एस’पीएफयुक्त फाउ’न्डेसन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्दा छा’लालाई घा’मले बिगार्न पाउँदैन । पा’उडर फा’उन्डेसनमा हाइ’ड्रेटिङ वा लि’क्विड फा’उन्डेसनको प्रयोग गरिहेर्न सकिन्छ ।
आ’इ पे’न्सिल कि’शोरी एवं कम उ’मेरका म’हिलाहरूले आ’इलाइनर लगाउने चा’हना छैन भने क’लरफुल पे’न्सिल ल’गाउन सक्छन् । हिजोआज २ रंगको आइ पे’न्सिल लगाउने चलन पनि छ । स्पेसल लिप कलर अ’नुहारमा तुरुन्त त’रोताजगी ल्या’उनका लागि लि’पस्टिकको रं’ग फेर्नुपर्छ । नियमित ने’चुरल लि’पस्टिक लगाउने गरेको भए रा’तो, मरुनजस्ता फरक रंग लगाउन सकिन्छ ।
सजिलै बनाउन सकिने कुनै हे’यरस्टाइल तथा रा’तो लि’पस्टिकले लु’क्स ह’ट देखिन्छ । विशुद्ध ब्रा’उन सेड्स आफ्नो आँ’खामा ब्राउन आ’इस्याडो मात्रै लगाउन मन लाग्छ र यसै गरिआइएको छ भने एक पटक मनलाई बुझाइहेरौं र यसको प्रयोग नगरौं । यो शे’डमा पहेंलो वा रा’तो रंगको केही अं’श हुन्छ तसर्थ यसको प्रयोगले आँ’खा थ’कित थ’कितजस्तो देखिन्छ ।
बरु आँ’खामा वि’शुद्ध ब्रा’उन शेड लगाउनुपर्छ यसबाट लु’क्स प्रा’कृतिक देखिन्छ । ठा’उँअनुसार मे’कअप गरौं अफिस जाँदा मे’कअप हलुका तथा त’रोताजा देखिनुपर्छ । यसका लागि ह’ल्का फा’उन्डेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका साथै आँ’खाको मेकअप गर्नका लागि ब्ल्या’क पे’न्सिल एवं म’स्कारा प्रयोग गर्नुपर्छ । पी’च वा अ’रेन्ज क’लरको लि’पस्टिक प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अ’फिसका लागि कमभन्दा कम मे’कअप गर्नु राम्रो हुन्छ । पा’र्टी मे’कअपका लागि लि’पस्टिक तथा आ’खाको डि’टेलिङमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । ग’र्मी मौसममा बेलुकाको पार्टीमा जानु छ भने लि’क्विड वा वा’टरप्रुफ मे’कअप गर्नु राम्रो हुन्छ । अ’नुहारमा क’म्प्याक पा’उडर ब्ल’सर लगाउनुपर्छ । यसका साथै आँ’खामा आ’इलाइनर नलगाई क्रि’मबेस्ड आ’इस्याडो लगाउनुपर्छ । प’रेला चम्का’उनका लागि क्या’स्टर आ’यल प्रयोग गर्नुपर्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
महिनावारीका बेला महिलाले प्याड किन्दा ध्यान दिनुपर्ने यी ५ कुरा
उसिनेको आलुले जस्तोसुकै कालीलाई पनि २० मिनेटमा गोरि बनाउछ ! यो तरिका अपनाउनुहोस – भिडियो हेर्नुहोस।
होन्डाले भित्रायो साढे ३४ लाख मूल्य पर्ने यो मोटरसाइकल, स्पिड प्रतिघन्टा